शेल मोजेक टाइलहरू के हुन्? - समाचार - शेन्ज़ेन Yiyao शेल टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
शेल मोजेक टाइलहरू के हुन्?
शेल टाइलहरू टाइल शिल्पकर्मीहरू द्वारा सिर्जना गरिएको थियो जसले गहनाको बक्सहरू सम्मिलित गर्दछ। शेलमा प्राकृतिक इंद्रधनुष समाप्त र चम्किला छापहरू ग्राहकहरूले गहिरो मन पराउँछन्। ताजा शेल टाइलहरू ताजा नदीको खोलले बनेका हुन्छन् जुन प्राय: सेता रंगमा पहेंलो गुलाबी निशानका साथ हुन्छ। र शेल टाइलहरू प्राकृतिक समुद्री खोलले बनेका हुन्छन् जुन प्राय: कालो, हरियो, पहेंलो, खैरो र सेतामा हुन्छन्, ती मूल रूपमा २ मिमी र mm मिमी बाक्लो हुन्छन्। Mm मिलिमिटर टाईल्सका लागि, यो २ मिलिमिटर शेल चिपहरू हुन्छ जुन mm मीमी आधारमा चिपकाइन्छ जुन म्याग्नेशिया वा पोर्सिलेनबाट बनेको हुन्छ।
यियाओले मनपर्ने शेल सतहको छनौटमा आश्चर्यजनक विदेशी टाइलहरू प्रदान गर्दछ जुन बाथरूम सजावट वा किचनको ब्याकस्प्लासमा उत्तम छ - कुनै पनि ठाउँका लागि उत्कृष्ट विकल्प जहाँ तपाईं न्यानो र आमन्त्रित भावना सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो शेल श्रृंखला र colors्गहरूको एर्रेमा आउँदछ: निलो, खैरो, क्रीम / बेज, सुन र सेतो, सही टाइल छनौट गर्नु तपाईंको बाथरूमको शैलीलाई लात लिनको लागि सजिलो तरिका हो। शेल टाइलहरू एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ जब तपाईं आफ्नो भान्साको रिमोडेलिंग बनाउँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरू यति मनमोहक छन् कि तपाईंको भान्साको ब्याकस्प्लासहरू जस्ता।
शेल टाईलहरू प्रायः सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। शेल मोजेक टाइलहरू प्राकृतिक मोती शेलले बनेका हुन्छन, कुनै सुन्दर शेल मोजेक टाइलहरू निर्माण गर्न कुनै औद्योगिक अपशिष्ट वा उर्जा प्रयोग गरिएको थिएन, त्यसैले हरियो उत्पादनहरूको रूपमा योग्य बनाइन्छ। तपाईं तिनीहरूलाई भित्ताहरू, फ्लोरहरू, भान्छाको ब्याकस्प्लासहरू, बाथरूम, टेबल टॉप्स, सौना स्थानहरू, इत्यादिमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं तिनीहरूलाई रेडियल स्तम्भ, क्याबिनेट र फर्निचरमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अघिल्लो:शेल मोजेक सिरेमिक टाइल कच्चा माल
अर्को:शौचालयको मोजेक टाइल कसरी शौचालय प्याक गर्ने मोजेक टाइल आकार